कलाकार निशा घिमेर अ’स्ताईन भन्ने झु’ठो खबरले परिवार निकै दुखी भएका छ ! – Taja Khawar
कलाकार निशा घिमेर अ’स्ताईन भन्ने झु’ठो खबरले परिवार निकै दुखी भएका छ !
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १२, २०७८ समय: १:१०:१२
नायिका तथा कलाकार निशा घिमिरे हाल नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत छिन्,उनको अवस्था पहिले भन्दा केही सुधार भएको छ, उनको उपचारको लागि भनेर देश विदेशबाट विभिन्न कलाकार एवं सामाजिक अभियन्ता हरूले सहयोग जुटाइरहनु भएको छ।
आम दर्सकहरुले भने छिट्टै निको हुनेछ भन्दै सबैले कामना गरेका छन
शरीरमा उनको हा’डछा’ला बाहेक अरु केही छैन । उनी बोल्न सम्म सक्दिनन् तर अरुले बोलेको कुरा बुझेकी हुन्छिन् । किनभने उनको बारेमा कसैले नराम्रो बोलेको सुनेपछी उनी आँ’खाबाट आँ’सु धु’रु’धु’रु झार्छिन् ।
उनले पहिले दर्जनौं म्युजिक भिडियोमा अभिनय समेत गरिसकेकी छिन् । भने उनको नामको पनि उतिकै चर्चा छिन अस्प तालमा डाक्टर एवं नर्सहरू उनको उपचारका लागि खटिरहनुभएको छ । तर केही टिकटक प्रयोगकर्ता हरूले निशा घिमिरेको मृ’त्यु भनेर पो’स्ट गरि’दिँदा उनको परीवार एवं आफन्तहरू यतिबेला पीडामा हुनुहुन्छ l
निशा घिमिरेको बुबा भन्नुहुन्छ (family) परीवारको सदस्य आफ्नो छोरी अ’स्पतालमा उपचार भैरहेका बेला यसरी गलत समाचार सम्प्रेषण गरेको प्रती निकै दुख व्यक्त गर्दै आफ्नो परीवारमा यस्तै भएको भए के गर्नु हुन्थ्यो
जबकी मेरो छोरी सकु’शल हुदा हुँदै यस्तो लेख्ने भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले यो विषयलाई लिएर कानूनी कार्वाहीको लागि प्र’हरीमा गएर उजुरी समेत दिने तयारी गरेको उहाले बताउनु भएका छन ।
उनले आफ्नो मोबाइल खोलेर हे’र्दा आफ्नी छोरीको मृ’त्युको ख’बर एक्कासि फैलिएको पाउँदा आफूलाई सारै दु:ख लागेको र विभिन्न आफन्त,मिडिया कर्मी, कलाकारहरूको समेत फोन आइरहेको बताउनुभएको छ ।
जिन्दगीमा घरी’घरी चो’ट लाग्दा खेरी एकान्तमा रु’न्छु एक्लै मनको ऐना हेरी”यति राम्रो अभिनय गरेर सबैको मन जितेकी निशा घिमिरे आज हस्पिटलको बेडमा मृ’त्युसँग लडिरहेकी छिन् । यतिबेला कलाकार तथा अभिनेत्री निशा घिमिरे यतिबेला गम्भीर दु’र्घ’ट’नामा परी सि’कि’स्त अवस्थामा उ’प’चा’र’रत छिन्।
तर बि’डम्ब’ना आज उनीलाई आफ्नो जीवनमा पनि भाग्यले यस्तै बनाइ दिएको छ । उनी ओछ्यानमा थ’ला परेर सुतिरहेकी छिन् । कृपया यस्तो गलत समाचार सम्प्रेषण नगर्न परिवारले बताउदै आउनु भएको छ । धन्यवाद
Last Updated on: August 28th, 2021 at 1:10 am